Ukunikezwa kwe-1 Gb / s fiber ku-22 euros ngenyanga ngempilo? Lokhu kutholakala eRED - Tech - Numerama - Teches RELAY
Accueil » I-TECH & ITELECOM »Ukunikezwa kwe-1 Gb / s fiber ku-22 euros ngenyanga ngempilo? Lokhu kutholakala ku-RED - Tech - Numerama
Ukunikezwa kwe-1 Gb / s fiber ku-22 euros ngenyanga ngempilo? Lokhu kutholakala ku-RED - Tech - Numerama
I-RED yi-SFR inikeza ukuphromotha okuthakazelisa kakhulu ekuhlinzekeni kwe-Intanethi okulungiselelwe kwe-fiber. Okubhaliselwe i-22 euros ibona isivinini sayo sokulanda sinyukela ku-1 Gb / s ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kumakhasimende amasha.
Kuze kube ngu-Novemba 12, I-RED yi-SFR ikhuphula ukunikezwa kwayo kwe-fiber ngokuhlanganisa inketho yamahhala we-Rate mahhala imvamisa ihlinzekwa kuma-5 euros. Ngale nketho, ijubane lokuxhumeka kwakho kwi-Intanethi lingafinyelela i-1 Gb / s ukulanda, ne-400 Mb / s in layishangokuya ngokufanele umugqa wakho lolu hlobo lokudonswa kwemali.
I-1 Gb / s fiber ku-22 euros kuphela
Ngokuhlanganisa inketho ye-Debit Plus mahhala nokunikezwa kwayo kwe-fiber, i-RED yi-SFR njengamanje inikezela isilinganiso esihle kakhulu samanani entengo okwamanje. Hhayi nje ngoba okunikezwayo kungamanani ama-22 euros, kodwa futhi ngoba leli nani lingunxa olunemibandela. Okusho ukuthi inani lokubhaliselwe ngeke liphindwe kabili ezinyangeni eziyishumi nambili zokuqala njengoba kunjalo kaningi kwabanye abahlinzeki bezinsizakalo ze-Intanethi. Ikhasi elizinikele likuvumela ukubala imali ongayonga ibhokisi lakho i-ADSL noma i-Fibre ngokukhokha okubhalisele kwakho kushibhile.
Okubhaliselwe ku-fiber ITHULWA yi-SFR kuma-22 euros ifaka konke, azikho izindleko noma inketho efihlekile. Lokho kusho ukuthi:
uxhumano lwe-inthanethi lufika ku-1 Gb / s ukulanda, i-400 Mb / s in layisha
izingcingo ezingenamkhawulo eziya kumugqa wefoni kuya ezindaweni ezingaphezu kwe-100
izingcingo ezingenamkhawulo kumaselula eFrance
Noma ukunikezwa sekuvele kuphelele, izinketho ezahlukahlukene zikuvumela ukuba wenze ngezifiso ukubhalisa kwakho ukuze uhlangabezane kangcono nokulindelwe yiwo wonke umuntu. Isibonelo, kungenzeka ubhalisele ku:
isixha seziteshi ze-35 TV (TNT) kuma-2 euros ngenyanga (kufakwe ibhokisi elingaphezulu)
isixha seziteshi ze-100 (TNT + channels international) kusuka ku-TV kuye kuma-4 euros ngenyanga (kufakwe i-decoder)
isixha seRMC Sport ngqo ebhokisini kuma-19 euros ngenyanga (ngokuzibophezela konyaka)
Ungashintsha kanjani i-ISP?
Uma okunikezwayo kukuthanda, yazi ukuthi manje kulula ukushintsha umhlinzeki wesevisi ye-Intanethi. Thumela izinhlamvu zokukhanselwa incwadi ebhalisiwe evuma ukutholwa, manje sekuyi-ISP entsha enakekela zonke izinyathelo. Ukuphela kwesimo sokusebenzisa leli thuba ukucela ukutholakala kwenombolo ye-landline ngokunikezwa kwe-RIO ID lapho ubhalisela i-RED yi-SFR. Ingatholwa ngokudayela 3179 kusuka kulayini othintekayo Yisihlonzi esivumelayo gcina inombolo efanayo yocingo ngesikhathi sokushintshwa kwe-ISP.
Ekugcineni, kufanele kwaziwe ukuthi i-RED yi-SFR inikezela abathengi bayo abasha buyisela ama-euro we-100 imali yokukhansela kusuka ku-opharetha wakudala. Ukusizakala ngalokhu, ikhasimende elisha kumele lithumele ikhophi lama-invoice kocingo okunikezwa kwakhe okudala ku-RED yi-SFR. Ukubuyiselwa kwemali kwenziwa kuma-invoice wesikhathi esizayo, phakathi kwamasonto e-5 ngemuva kokuthola isicelo sokubuyiselwa imali.
Lesi sihloko sivele kuqala https://www.numerama.com/tech/567316-une-offre-fibre-1-gb-s-a-22-euros-par-mois-a-vie-cela-existe-chez-red.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=567316
Ababili abebesebenza ku-Twitter babhekene necala lokuhlola iSaudi Arabia
I-23h RTL Newspaper - VIDEO
ABANTU & LIFESTYLE7,723